နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ရထားလမ်းဖြတ်ကူးနေရင်မြန်အောင်ပြီးတော့လမ်းမကြီးလက္ခဏာတွေ၏အကျိုးကျေးဇူးများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ရထားခရီးသွားခြင်း > နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ရထားလမ်းဖြတ်ကူးနေရင်မြန်အောင်ပြီးတော့လမ်းမကြီးလက္ခဏာတွေ၏အကျိုးကျေးဇူးများ
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 31/03/2020)
ပိုပြီးဖြစ်ခြင်းဆီသို့ဦးတည်ကြီးထွားလာလမ်းကြောင်းသစ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်-ဖော်ရွေ မြောက်မြားစွာဖြစ်စေခဲ့သည်ထားပါတယ်, နှင့်တကမ္ဘာလုံးအစိမ်းရောင်အစပျိုးကွဲပြား, ရောနှောကြီးတွေမြို့ကြီးများနှင့်အသေးစားမြို့များတွင်. ဒီ၏များစွာသောနိမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုမှာ spheres ကိုရှိလူများရဲ့နေ့စဉ်ဘဝနှင့်အလုပ်အတွက်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်များတိုးမြှင့်သုံးစွဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှေ့မှာတစ်ခု option ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ဖူး. တစ်ခုမှာထိုကဲ့သို့သောဧရိယာလမ်းဘေးကင်းလုံခြုံမှုဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်လမ်းဆိုင်းဘုတ်များထံမှအသွားအလာအလင်းအိမ်မှစနစ်များကိုအချက်ပြမှအရာရာ၌အသုံးပြုသွားမည်သည်အဘယ်မှာရှိ, အရှင်တစ်ဦးမှာလမ်းခွအေနမြေားကိုပိုမိုမြင်သာအောင် စျေးနှုန်းချိုသာသောစျေးနှုန်း, လည်း နှစ်ဦးစလုံးပိုက်ဆံချွေတာ နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ကမ္ဘာဂြိုဟ်.
လမ်းပေါ်မှာအရိပ်လက္ခဏာကိုတကယ်သူတို့အလုပ်သူတို့လုပ် lit ခံရဖို့မလိုအပ်ပါဘူးနေစဉ်, အလင်းအိမ်ကျိန်းသေယာဉ်မောင်းကပိုသတိထားမိအောင်၏တစ်ဦးကဆက်ပြောသည်အကျိုးကျေးဇူးရှိ. LED မီးလုံးတပ်ဆင်ထား solar-powered လမ်းဆိုင်းဘုတ်များပိုကောင်းမြင်သာမှုအတွက်နည်းလမ်းများကို, တစ်နေ့တာအတွင်းနှင့်ညဉ့်အချိန်တွင်နှစ်ဦးစလုံး (သငျသညျစစ်ဆင်ရေး၏သူတို့ရဲ့အခြေခံမူအကြောင်းပိုမိုထွက်ရှာတှေ့နိုငျ ဒီမှာ) သူတို့ကများသောအားဖြင့်မတော်တဆမှု-ကျရောက်နေတဲ့အခြေအနေများဖန်တီးပေးသောပင်ကြမ်းတမ်းရာသီဥတုအခြေအနေကာလအတွင်းအကောင်းတစ်ဦးစစ်ဆင်ရေးအကွာအဝေးသည်. မည်သို့ပင်သူတို့၏အရပျ - လမ်းဆုံမှာ, လမ်းဆုံလမ်းခွသို့မဟုတ်ရထားလမ်းဖြတ်, ဤဆိုင်းဘုတ်များသည်လမ်းသွားလမ်းလာများနှင့်ယာဉ်များအတွက်ပိုမိုလုံခြုံမှုရှိသည်.
ဤနိမိတ်လက္ခဏာ၏အလွန်အကျိုးရှိခြင်းနှင့်အားသာချက်သူတို့ကိုကျွေးမွေးသောစွမ်းအင်ကိုကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများကိုလောင်ကျွမ်းစေခြင်းမှမလာပါဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာကျောက်မီးသွေးသောလမ်းအတွက်ညစ်ညူးစေပါဘူး, ဆီ, နှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့မ, အရာက 100 ရာခိုင်နှုန်းကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်-ဖော်ရွေ. တစ်ခုတည်းသောအခွအေနေရိတ်သိမ်းခံရဖို့နေရောင်ခြည်များအတွက်နိုင်ရန်အတွက်လုံလောက်အောင်နေသာနာရီ, တစ်နှစ်ကြာအသုံးပြုရန်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်သိမ်းဆည်းထား. လှည်အဖြစ်ဤလိုအပ်ချက်ထင်ရစေခြင်းငှါအဖြစ်, တရားစွဲဆိုတစ်ချိန်က, တပ်ဆင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လှုပ်ရှားမှုရန်၎င်း၏ sensitivity ကို၏အမှန်တကယ်ချွေဖြစ်ပါသည်, လမ်းအပေါ်ကိုမှန်ကန်အသွားအလာလည်းမရှိတဲ့အခါမှသာလုပ်ကိုင်ဤကဲ့သို့သောရေးသားချက်များ်, အစားနာရီဝန်းကျင်၏. နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်အသုံးပြုမှု မျက်နှာစာများနှင့်အမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်များမှာ, သူတို့မဟုတ်?
ဤအတပ်ဆင်လျစ်လျူရှုရန်ခက်ခဲနေကြသည်ကတည်းက, သူတို့အဝိုင်းအတွက်ယာဉ်မောင်းများနှင့်လမ်းသွားလမ်းလာများ၏အသိအမြင်မြှင့်တင်ရန်, ယာဉ်ရပ်နားအများကြီးအတွက်, အကြောင်းမရှိမတော်တဆမှုမှလူသိများကြသည်အန္တရာယ်ဒေသများ, စသည်တို့ကို. သူတို့ဘယ်နေရာမှာမဆိုသူတို့ကိုနေရာကဖြစ်နိုင်သောကြောင့်လုပ်ကိုင်ရန်အနီးအနားမှာဝါယာကြိုးများသို့မဟုတ်လျှပ်စစ်အရင်းအမြစ်မလိုအပ်ပါဘူးဆိုတဲ့အချက်ကို, သူတို့တကယ်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမှတပါး တန်ဖိုးနည်း နှင့်အနိမ့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု. တစ်ဦးအပိုဆောင်းအကျိုးကျေးဇူးသူတို့ဒီတော့လွယ်ကူသော install လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဖြစ်ပါသည် - သူတို့အမြဲတမ်းရေးသားချက်များသို့မဟုတ် သာ. ကြီးမြတ် mobility များအတွက်ခရီးဆောင်တဦးတည်းမှဖြစ်စေပူးတွဲနိုင်ပါသည်. ဤသည်မှာလမ်းဖောက်ပေးလိုက်တာစဉ်အတွင်းသူတို့ကိုအကြီးအက, သူတို့လက်တွေ့ကျကျမျှအချိန်နှင့်အနီးအနားရှိ footpaths ဖို့နှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့မပါဘဲတက်ထားဖယ်ရှားနိုင်ပါသည်အဖြစ်.
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးချကြောင်းရထားလမ်းကူးအချက်ပြမှုများကိုနှစ်ဦးစလုံးစက်မှုဇုန်များနှင့်ကျေးလက်ဒေသများရှိအသုံးပွုနိုငျ. ဒီလိုမျိုး၏ထုတ်ကုန်များ, ကဲ့သို့ https://www.solarlightingitl.com/solar-railroad-crossing-systems/ ကြိုးမဲ့အာရုံခံကိရိယာ၏သီလအားဖြင့်ချဉ်းကပ်ရထား detect, သူတို့သည် signal ကိုရယူတခါ, သူတို့ရထားလွန်ပြီကြောင့်အပုဒ်ဖြတ်ကူးရန်အန္တရာယ်ကင်းအထိသွားသောကူးအလင်းအိမ်နှင့် sound ကိုသက်ဝင်. ဤရွေ့ကားအချက်ပြမှုများကိုများသောအားဖြင့်ရထားကူးတစ်ခုချင်းစီဘက်မှာအားလုံးအတွက်သွားရ, နှင့်ကြိုးမဲ့ link ကိုတစ်ချိန်တည်းမှာပေါ်နဲ့ off သူတို့ကို switches. ဖြစ်ကောင်းရှိသူများကို install ပတ်သက်. အကောင်းဆုံးအရာမျှပြင်ပသေတ္တာများသို့မဟုတ်ပါဝင်ပတ်သက်ရှည်လျားကြိုးတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဖြစ်ပါတယ်.
မြေတပြင်လုံး system ကိုနောက်ဆုံးဖို့လုံလောက်တဲ့ကြောင်းနေရောင်စွမ်းအင်အပေါ်မှီခို 10 မပြတ်မတောက်အလုပ်၏နာရီတစ်ကြိမ်အပြည့်အဝဖြင့်တရားစွဲဆိုသော်လည်းဘက်ထရီ backup လုပ်ထားရှိပါတယ်, အဆိုပါစုဆောင်းစွမ်းအင်ကုန်သောအခါနေရောင်ခြည်၏ပြည့်စုံမှုမရှိခြင်းရှိသင့်တယ်. အချို့သော program စံတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးလျှင်စနစ်ကိုလည်းတစ်ခါတစ်ရံမှသာ activated ဖြစ်ပါတယ်, ထိုကဲ့သို့သောတိကျတဲ့မြန်နှုန်းအဖြစ်, ယင်းချဉ်းကပ်ရထားရွေ့လျားသောအချိန်, ဥပမာ. တန်ဖိုးကျော်ပါလျှင်ကိုယ်ကသာနှိုးဆော်သံမီးကို set up နိုင်ပါတယ် 65 ယာဉ်အသွားအလာတစ်နာရီမိုင်နှင့်လျစ်လျူရှု, ထက်နှေးကွေးရွေ့လျား. Options ကိုကွဲပြားကြသည်.
အစိမ်းရောင်စွမ်းအင်အပြည့်အဝသေးပျမ်းမျှလူတစ်ဦး၏ဘဝအသက်တာသို့ထည့်သွင်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေသော်လည်း, ကျနော်တို့ကတစ်မိနစ်ဖြင့်၎င်း၏ရှေ့မှောက်တွင်နှင့်အသုံးပြုမှုကြီးထွားအောင်မြင်နိုင်ပါသည်, အသက်တာ၏ပိုပိုပြီး spheres ကိုဝင်ရောက်. ဒါဟာပြီးသားတည်တည်သောသူအားဖြင့်ထိခိုက်ခဲ့သညျအမှနျတကယျကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာဂြိုလ်၏အနာဂတ်သည်နှင့်နောက်ထပ်သဘာဝပျက်စီးလွယ်သောနူးညံ့သိမ်မွေ့သောချိန်ခွင်လျှာနာကျင်စရာမလိုဘဲတိုးတက်မှုဘက်လျက်တစ်ခုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်-သတိလမ်းကိုကိုယ်စားပြုတယ်. solar-powered လမ်းနှင့်ရထားလမ်းဖြေရှင်းချက်လက်တွေ့ကျတဲ့ကောင်းတစ်ခုဥပမာများမှာ, အလွန်ကြီးစွာသောသဘာဝသယံဇာတများ၏စမတ်နှင့်စျေးသိပ်မကြီးတဲ့ applications များ.
ကျနော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ဂရုစိုက်ကျနော်တို့နယ်လှည့်များ၏အနုပညာကိုချစ်. အတူရထားခရီးစဉ်ကို booking အားဖြင့် Start တစ်ဦးကရထား Save, ယနေ့တွင်!
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ရထားလမ်းဖြတ်ကူးနေရင်မြန်အောင်ပြီးတော့လမ်းမကြီးလက္ခဏာတွေ၏အကျိုးကျေးဇူးများ” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သငျသညျဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. တစ်ဦးနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည် ဤ blog post မှ link ကို. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fsolar-powered-railroad-crossing-signal%2F%3Flang%3Dmy ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
အောက်ပါလင့်ခ်များတွင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, ဒီ link ကိုစာမျက်နှာများတွင်လေယာဉ်ဆင်းသက်အင်္ဂလိပ်လမ်းကြောင်းများအဘို့ဖြစ်၏, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, သင် / pl မှ / TR သို့မဟုတ် / es နှင့်သင့်ရွေးချယ်ပိုမိုဘာသာစကားများပြောင်းလဲနိုင်သည်.
EcoFriendlyTravel GreenEnergy IndustrialEngineering ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောစွမ်းအင် SolarEnergy ရထားခရီးသွား